France waa inay magaalooyinka ay qurux badan oo dalka durkiya caan mahad kulkulul dalxiis loo jecel yahay. Dalku waa a hiigsiga riyada caan ah adduunka oo ay dhaqan cajiib ah oo cuntada delicious. Iyada oo dad badan oo dalxiisayaal iyo ido in Paris, magaalada inta badan noqon kartaa mid aad u buux-, gaar ahaan xagaaga. Nasiib wanaag, France ayaa si ka badan in ay bixiyaan ka badan oo kaliya Paris, waxaana sahamiyaan shan ka mid ah magaalooyinka yar dadku ku hoos.
Waayo, kuwa xiiseyneyso naqshadaha, Lyon sidoo kale waxay hoy u tahay dhowr kaniisadood Renaissance in doona waxaad ka helli oo dhan kala firdhiyey oo magaalada u taliya.
Haddii aad xiisaynayso in cadar, Grasse waa meel ku fiican kuu. Marka aad soo martay ay xasilloon, raaxo jidadka, waxaad ka heli doontaa naftaada doonaya in ay mar kale iyo mar kale ku soo laabto. Grasse waa meel qurux badan oo ku yaalla weheliyaan Riviera Faransiis iyo, sida ugu wanaagsan ee ku yaab ah deegaanka halkan waa inaad ku tababarto Faransiiska!!
Caan ku noqotay inay noqoto magaalada labaad ee ugu weyn Faransiiska, Marseille waa magaalo la cimilada cajiib ah xeebaha. Halkan waxaad ka heli doonaa jajabkiisa Tacaddi iyo yaab xarumaha tahay inaan kaa tago marti qaaday muddo saacado ah. Waayo, kuwa nasashada doonaya, Marseille hoy u tahay xeebaha cajiib ah meesha aad ku maydhaa karaa badda wacan. Marseille waxay bixisaa ugu wanaagsan ee labada Caalamka sidii loo buuxiyey hawlaha dhaqanka iyo sidoo kale goobaha degan in ay ku nastaan.
Inta badan loo arkaa mid ka mid ah magaalooyinka ugu underrated France ee, Lille ka yar dadku ku badan qaar ka mid ah dalal badan oo caan Faransiis laakiin weli si siman u qurux badan. dalxiisayaasha marayso karaa haad loogu fuuli jiray oo wuxuu ku raaxaysan Architecture midabo iyo nool jawi jidka. Waayo, waxaad tahay kuwii ku caashaqi jiray, ah Palace of Fine Arts Matxafku waa goob booqasho-waajib ah maadaama ay hoy u tahay farshaxanka labaad ee ugu weyn Faransiiska.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-less-crowded-cities-to-explore-in-france%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Waxaan u shaqeeyaa sidii hage safar waqti dhiman ah oo ku yaal Kent iyo blog ku saabsan khibrada. Waxqabadkeeda usbuuca ugu xiisaha badan waa socod lug ah oo ku yaal Xeebta Koonfur Galbeed ee Bristol. Iyadu sidoo kale waa u doodaha qaab nololeedka waari kara waxayna rajeyneysaa inay buug ka qorto maalin uun. Waxay iyada iyo waalidiinta iyo iyada Coco Frenchie la odhan jiray ku nool - Waxaad halkan si aad u riixi kartaa ila soo xiriir
Top Yurub Tareen Tours Waxaad ma habboon tahay Miss
Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Isbaanishka, safarka Europe
Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Travel Holland, Tareen Safar Talyaani, Tareen Travel The Netherlands, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe